आयल निगमले बढायाे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, के काे मूल्य कति ? – rastriyakhabar.com
आयल निगमले बढायाे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, के काे मूल्य कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य बढेको हो । मंगलबार निगमले गरेको निर्णय अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ।
योसँगै पेट्रोलको मूल्य बुधबारबाट तराईका जिल्लामा ९९।५ रुपैयाँ पर्नेछ भने डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ८५।५ रुपैयाँ पर्नेभएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ पर्नेछ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्नेछ । निगमले इन्धन तथा हवाइ ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ । त २० चैतमा पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएयता निगम मूल्य समायोजन गरेको थिएन ।
ओली-प्रचण्डको डेढ घन्टा भेटवार्ता : ओली भन्छन्, ‘प्रदर्शन हुन्छ, सबैलाई देखाइदिन्छु’
सांसद र पार्टीबाट हटाइयो, म अदालत जान्छु : सरिता गिरी
राष्ट्रपतिसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट
सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टी दुवैबाट निष्काशन